Neuroticism - trait ubuntu ukuthi libhekene ukungahlaliseki, ukucasuka, ukukhathazeka futhi yokuzingabaza. Ibizwa nangokuthi neuroticism, kusukela esiGrekini. namangqamuzana ezinzwa - ezinzwa wahlala. Neuroticism kwengqondo - kwenombolo ubuntu, okubonisa labile ikakhulukazi futhi esisheshayo isimiso sezinzwa. Amazinga aphakeme neuroticism libhekene ukucasuka futhi ezifweni imicimbi womuntu. Ukuziphatha okunjalo trait uhlamvu ukubonwa ngezikhalo ikhanda, izinkinga zokulala, izimo edlulayo futhi ukungahlaliseki kwangaphakathi.
Labo abantu abaye aphakeme amazinga neuroticism, ezicashe yangaphandle endaweni efihlekile Ukunganeliseki yangaphakathi, kukhuphuke ukukhathazeka nokungaqiniseki ngekusasa. Avame basabela kakhulu ngokomzwelo, imizwa ayanele ngokoqobo ngaso sonke isikhathi. emizweni ezingemnandi elihlobene ne izigameko ezingezinhle ezavela, kanye unsuitability sengqondo esivamile sokulindela okubi womuntu. Ngokwesibonelo, umuntu njalo uhlangabezana neyroticheskaya ukuthi izibani nemishini, kungakhathaliseki umnyango ikhiywe ngokuphephile off, wathola ukwesaba kwezokuthuthwa komphakathi okuyingxenye yempilo yansuku zonke. imizwa nehaba ngokubukeka kwabo siqu noma ubulili isikhalazo, kwesatshwa esilawulayo zokungethembeki noma izinkinga zezimali.
Odokotela bengqondo ukuqaphela ukuthi izimbangela neuroticism okusezingeni eliphezulu kuyinto isidingo unmet. Ngaphezu izidingo eziyisisekelo begazi ziyabhekelelwa futhi nomphakathi. Esinye salezo yisidingo yokubuswa - abantu badinga impumelelo ngamandla, ukuphakama. Lezi zifiso kwesinye isikhathi ngeke basuthe. Ngokwesibonelo, ingane encane kaningi uvele angazi ukuthi enzeni futhi sengozini uma ziqhathaniswa nabantu abadala, futhi esikhathini esizayo, lo muzwa ingalungiswa. Khona-ke lo omdala uyaqhubeka ukuzwa singenamandla nokukhathazeka. Kusuka lapha kukhona ukuzibona ngiyisiphukuphuku, kukhona umuzwa wecala, futhi neuroticism ezingeni liphuma khona. Ekuqaleni, lezi zimpawu abantu nje bamshaya indiva. Nokho, uma isikhathi akusho lithathe izinyathelo zokulungisa, isimo umuntu eba ezinzima kakhulu, futhi izinga lempilo is eziwohlokayo.
Yini ebangela i-neuroticism kukhuphuke
Kancane kancane, ukuphila komuntu kuba buhlungu, ukwesaba eyize bese zihlale zikhathazekile ahoxise wonke amabutho kukhona izifo ezihlukahlukene, ngokuvamile zengqondo. impilo Bayanda nekomfotrnoe ephonsa ukungabaza yokuchitha isizungu naye nabanye abantu. Neurotic inkimbinkimbi izimpilo wona kodwa futhi abanye. Neuroticism - lokhu akulona kuyinsakavukela khona, kodwa namanje hhayi zokugula. Nokho, ngaphansi kwezimo ezinzima, ungaya ku-neurosis noma sengqondo, kodwa lokhu ngoba uyayazi imbangela zengqondo.
Le ndoda ne inqolobane uhlobo neyroticheskim nzima futhi isikhathi eside kunaleso abanye abasabela ngayo ukucindezeleka. Esimweni esicindezelayo, kuba ukukhathazeka, ukucasuka, ukubuyisa - ngisho kuleli zinga voltage lapho ezinye izinhlobo ubuntu ngeke anakekele. Neuroticism - kungcono isici okufana ubuntu ukuthi inkimbinkimbi ukubuya psyche womuntu ukuze lonke evamile. Lo mqondo eduze ahlobene imizwelo. Kuyaziwa ukuthi eyaziwa abantu ngokomzwelo futhi ngokomzwelo kakhulu ngaphezu kwabanye othambekele ukuvela kanye nokuthuthukiswa ukwesaba nokukhathazeka esinako, zokwesaba nasesiyaluyalwini esilawulayo-abayimilutha.
Neuroticism ngu Eysenck
Hans Eysenck (1916-1997) - omunye wezifo edume kunazo British, ungumdali ubuntu ithiyori ngokuthi isici sakhe. Ingabe umsunguli futhi umhleli womagazini eziningana yesayensi kwengqondo, umsunguli we amaphepha amaningi kwenqubekela-phambili kwezesayensi. Engiyicabangayo iwukuhlakanipha isakhiwo lomuntu oyedwa, esekelwe izikali ezintathu eziyisisekelo - extraversion futhi introversion, neuroticism futhi psychoticism.
Yaziwa e yesayensi emibuthanweni Eysenck yemakhono neuroticism isasetshenziswa ukucacisa uhlobo ubuntu nokhondolo kwanoma. ukuhlolwa Special akhiwa sokusebenza kwengqondo kungacacisa psycho kwabantu ngokubhubhisa imibuzo ezivamile elula. Ukuhlolwa kwenza kube nokwenzeka ukuba embule ukuziphatha sici ngabanye ezimweni zansuku zonke futhi esicindezelayo. Ngokusho imiphumela ngosizo esikalini ungakwazi ukunquma onjani; kungaba okungukuthi uqinile noma ivame ukuba kwemizwa uhlelo Neuroticism; unkom 'idla yodwa noma extroverted ngokuziphatha kwayo, njalo njalo. d.
Neurophysiological oyasnenie neuroticism
Ukunqunywa extroversion noma introversion esekelwe izici esingokwemvelo we isimiso sezinzwa esiyinhloko, kanye nokuthambekela ukuzinza noma Neuroticism kunqunywa kuye autonomic nesimiso sezinzwa. Lesi sakamuva, esikhundleni salokho, luhlukaniswe nozwela futhi parasympathetic. Uhlelo nozwela unesibopho ukuziphatha umzimba ucindezelekile, ushukunyiswa yiwo kwenhliziyo ophilisayo, abafundi uvuleke, ukuphefumula ophilisayo futhi kwandisa ukujuluka. I parasympathetic isimiso sezinzwa elawula ukubuya komzimba evamile. Ngokusho theory Eysenck, imizwa okwehlukile ehambisana amazinga ehlukene ukuzwela lwalezi nhlelo ezimbili. Uma asebenzayo the NS onozwela excitation kwenzeka ngokushesha, futhi unyathela amabhuleki ukukhuthazela - uphendulela emotionality kuqiniswa, futhi okuphambene nalokho. Ukulawula umsebenzi lwalezi nhlelo Kwenziwa hypothalamus. Ukwenza kusebenze autonomic nervous system e bonke abantu kuholela esimweni injabulo, kodwa esimweni esicindezelayo bonke abantu ebaphatha ngetindlela letehlukene: othile ophilisayo kwenhliziyo, ukujuluka yanda, abanye bathambekele iwela stupor, nokunye ..
A uphawu amazinga aphakeme neuroticism kungenzeka ukukhathazeka okungenasisekelo nokukhathazeka. Abantu abaningi ukubukela ukubukeka kwabo futhi obakhathalelayo babukeka kanjani, kodwa ubuntu neyroticheskoy nakho okunjalo akwenele. Bonke abantu kokuhamba ekhaya, uhlole ukuze ubone uma kuvaliwe izibani sahluthulela umnyango, kodwa umuntu nge ezingeni lelisetulu neuroticism ngisho emva kokuhlola ayisekho sikhathazeke ngayo. abantu Neurotic kukhona ngisho futhi ukuzenyeza, akuhambisani ngokoqobo. Bayakhononda izizwa ezizwa engaphilile, ukucobeka, izinhlungu zekhanda noma ubuhlungu beqolo, ubuthongo isiphithiphithi uphazamise nezimoto ukuntengantenga ka isimo esingokomzwelo, kanye izinguquko njalo kwemizwa. Kaningi eshushiswa uvalo, zokwesaba nasesiyaluyalwini esilawulayo-abayimilutha.
Neuroticism - lokhu akulona isifo sengqondo, kodwa umane nje isici psyche womuntu. Ukukhathazeka, ukungahlaliseki nokungaqiniseki esivela abantu abaningi esimweni esicindezelayo, kuba neuroticism. Test lidlule, kanye izazi zokusebenza kwengqondo, kuzokusiza ukuba uziqonde ukuthi ukusebenza ethile umuntu kudlulwe. Yiqiniso, zikhona izimo lapho amazinga aphakeme neuroticism kakhulu nzima ukuphila, ukumosha ubuhlobo bethu nabanye, izimbangela ukhathazeke futhi ukhathazeke ngaphandle kwesizathu. Kulokhu, ulungisa ukuziphatha kwabo izosiza wengqondo. Ngaphezu kwalokho, amazinga uma umthwalo enkulu ukucindezeleka noma nezinye izimo ezinzima eziphakeme neuroticism ungavula ku neurosis noma sengqondo. Nge izifo ezifana azidingi ukuvakashela wezengqondo kanye zengqondo. Kunoma yikuphi, uma ezinye kuthambekela futhi ukuziphatha ukugxambukela ukuphila futhi uthole injabulo ekuphileni, kudingeka usebenzele kuzo.
Engine Vaz-2110 (8 valve) injector: idivayisi. Vaz-2110: injector wesifunda
Izimpophoma Düden Antalya: incazelo, umlando kanye namaqiniso ezithakazelisayo, izithombe
Sponge ikhekhe - izimfihlo ukunambitheka obucayi